Spieth (Xiamen) Technology Co., Ltd. hwakagadzwa muna 2001. Tiri imwe kambani uye nokutengesa zvakawanda maindasitiri uye ezvokutengeserana okuchengetera anonetsa zvikuru hurongwa uye zvinhu wabata equipments.
We dzidzira ari zano, magadzirirwo, uye kuisa inoshanda anonetsa zvikuru uye okuchengetera mhinduro; kupa kuti siyana zvinhu kushandisa midziyo yakasiyana-siyana maindasitiri uye vezvokutengeserana sectors uyewo private & voruzhinji masangano munyika yose.
Tinoshandisa yepamusoro zvinhu inopiwa Shanghai Baosteel Group (guru simbi fekitari China). Tine yemhando car electrostatic upfu kupenda mutsetse uye 2 pre-kurapwa rokutsvaira enyika.
Pana Spieth, tinotenda mukuunza zvinhu uye midziyo hunovimbisa soro nenhanho unhu zvaidiwa maindasitiri nemitemo. Isuwo tinotenda kuti rokutengesa ose uye chirongwa, zvisinei kukura kana kukosha, vakakodzera kuburikidza tinotsigira zvachose kubva kuronga redu rakaisvonaka pashure-okutengesa basa.
To basa nani vatengi dzedu, isu makasimbisa pre-sale uye pashure-sale basa uye vakaedza kupa ayo vatengi yakanaka, panguva yakakodzera uye ramangwana-zvinangwa rwokugadzira mabasa. Spieth kugutsa siyana zvinodiwa vatengi zvedu, kuvandudza mutengi kugutsikana, simbisai refu-refu takunda zvisamumirira naye ukama nemi!
uzivi hwedu ndiko kukubatsira kushandisa yokuchengetera zvinhu nzvimbo izere, kukwidziridzwa pamusoro Database mvumo Utilisation, chiwedzerwa yokuchengetera zvinhu chekuchengeta okufunga. Isuwo kurerutsa mari, ose padiki uye ose Dime iri optimized pana Engineered Products.
Gravity Kuyerera anonetsa zvikuru , asingapeteki akazotsiviwa nemapepa aipeteka Wire Mesh Container , Warehouse nhovo anonetsa zvikuru System , nhoo anonetsa zvikuru aidzivirira , nhoo anonetsa zvikuru dzaro , Warehouse nhovo Rack ,